WAA MAXAY ALOE FAA'IIDO LEH, HANTIDA DAAWOOYINKA IYO CONTRAINDICATIONS EE DHIRTA - DHIRTA GUDAHA
Aloe waa geedka caanka ah ee caanka ah ee la koray si loo isticmaalo dambe. Waxaa jira in ka badan 350 nooc oo dhirtaas ah, guriga dhexdiisa, qaar ka mid ah waa la koray - xayawaan, hambalyo, daboolan.
Guryaha bogsigu waxay u egtahay cadaanyo aloe iyo geedka aloe. Dheeriga ugu badan ee aloe, oo loo yaqaan 'Barbados' ama 'vero'.
Aloe wuxuu leeyahay bogsiinta sifooyinka, waxayna leedahay wax ka horjeeda. Waxaa mahad leh awoodda dhirta si ay si wax ku ool ah u saameyn ku yeelato caafimaadka waxa ay noqotey mid aad u ballaaran oo aad u ballaadhan dadku.
Sida ay u saameeyeen bini'aadamka, sida loo dalbado iyo haddii ay habboon tahay in la iska ilaaliyo isticmaalka aloe ee xaaladaha kasta ayaa laga sii wadi doonaa.
Halabuurka kiimikada ee aloe iyo hantidiisa faa'iido leh
Qalabka caleen qumbaha waxaa ku jira inta ugu badan ee dadku ku qanacsan yihiin geedkaan. Abaarta cajiib ah oo aan la qabin, iyo hantidooda faa'iido badan ayaa leh.
Iyada oo qayb ka ah aloe ka badan laba boqol oo walxaha bayoloji firfircoon. Maaddooyinkaasi waxay saameyn ku yeeshaan jidhka bini'aadamka marka loo eego dhirta iyo faa'iidooyinka.
Casiirka caleenta wuxuu leeyahay bactericidal, waxyeello-bogsiin, wuxuu yareynayaa dareenka maqaarka.
Walxaha ugu muhiimsan ee ku jira kiimikada kiimikada ee vera badi:
Fitamiin B - B1, B2, B6;
Elektaroonada: iodine, iron, zinc, manganese, fluorine, silicon, vanadium, bromiin, fosfooraska, sulfur, copper iyo kuwo kale oo badan;
polysaccharides, chromonemes iyo walxo kale oo nafleyda firfircoon.
Qodobbada waxtarka leh ee geedka:
loo isticmaalo kondomoole;
waxay hoos u dhigtaa heerka sunta ee jirka;
loo isticmaalo gynecology;
uu leeyahay anti-bararka, tallaabo bakteeriyada;
wuxuu xoojiyaa bogsashada boogta;
caadiyan nidaamyada dheef-shiid kiimikaad ee jirka;
loo isticmaalo si loo daaweeyo habdhiska dareemayaasha, wadnaha, wadnaha, dheef-shiid kiimikaad.
Qalabka Faragelinta ee alaabta ceeriin ah
Casiirka Aloe ee ku jira caleemaha geedka, ayaa laga helay codsiyo ballaaran ee daawada iyo qurxinta. Qalabka farmashiyaha ee alaabta ceeriin ee caansaan ah ayaa si fiican loo darsaday, taas oo noo ogolaanaysa inaan ka hadalno iyaga oo leh kalsooni.
Aloe waa geedka dilka ah. Goobaha ugu badan ee la daweynayo waxay caan ku yihiin caleemaha geedka saddex sano ah. Laga soo bilaabo jirridda jebiya ama jarjar caleemaha cufan oo leh dherer aan ka yarayn 15 cm.
Caleemaha caleenta ah ee la gooyey lama hayo hawada muddo ka badan 3-4 saacadood, maadaama ay si deg deg ah u qalalaan. Inta lagu jiro wakhtigan, casiirka aloe wuxuu lumiyaa tayada daawooyinka. Sidaa darteed, jarida caleemaha, waxay u baahan yihiin in laga qariyo iftiinka oo lagu rido qaboojiyaha, halkaasoo lagu kaydin karo ilaa hal sano.
The guryaha bogsiinaya aloe:
asiidhyada dabiiciga ah ee ku jira dhirta, waxay caadi u yihiin floranka mindhicirka, ka hortagaan geeddi-socodka burburka;
carotenoids ee aloe waa kooxo ka mid ah walxaha u keena fiitamiin A. Waxay yareeyaan heerarka kolestaroolka, caadi u ah dheef-shiid kiimikaad, iyo sidoo kale saameyn ku yeelato xasaasiyadda ee retina;
Fijeerada waxay u shaqeeyaan sida anti-bararka, wakiilka hemostatic iyo bactericidal;
Vitamin C waa qayb muhiim u ah unugyada cellular. Waxay hubinaysaa cufnaanta unugyada, adkeeysa unugyada ilkaha iyo derbiga vascular, waxay kordhiyaan sifooyinka jirka ee ilaalinta;
enzymes ee aloe caadi u dheecaan dheecaan, bixiyaan habka dheef-shiid kiimikaadka caadiga ah, waxay hoos u dhigtaa nidaamka da'da ee jirka;
Macdanta iyo walxaha raadraaca dhirta daawadani waxay nadiifisaa jirkaaga sunta iyo jajabka. Waxay saameeyaan habka dheef-shiid kiimikaadka, iyaga oo caadi u ah, kordhiya difaac, waxay leeyihiin saameyn xanuunka;
Kahetin wuxuu xoojiyaa derbiyada xididdada dhiigga, wuxuu leeyahay waxyaabo ka soo horjeeda antiallergic;
flavonoids wuxuu saameyn ku yeeshay jirka oo idil. Kuwani waa agaasimayaal dabiici ah, oo ah hawlaha ugu muhiimsan ee ay tahay in la qabsado xaaladaha dibadda. Hayso saameyn jeermis ah.
Daawada dhaqameed waxay sharraxaysaa calaamado badan oo loogu talagalay isticmaalka aloe ee guriga. Waxaa loo isticmaalaa dibedda iyo gudaha.
Ma taqaanaa? Aloe ka baxo, oo bilaabay inuu qalajiyo talooyinka, ayaa loo tixgeliyaa faa'iido ugu weyn caafimaadka, waxaana lagu talinayaa daaweynta.
Aloe waxaa loo isticmaalaa dibadda si loo daweeyo cudurrada maqaarka si ay uga takhalusaan finanka, boogaha, boogaha, bogsashada nabarka, lupus, canbaar.
Casiirka Aloe waxaa ka mid ah polysaccharides, kaas oo ka dhigaya filim ilaalineed maqaarka, ilaaliya oo jilciya, qoyaan iyo dardar-galinta unugyada. Iyada oo ay tayada sarreysa, waxaa laga helaa badeecada aloe waxaa inta badan lagu daraa walxaha ilaalinta maqaarka..
Inside caleemaha waxaa loo isticmaalaa tiro badan oo cudurada ee xubnaha kala duwan. Iyadoo leh cudurada neefsashada - tiibishada, boronkiitada, neefta neefta, neefta, - aloe wuxuu u fududeeyaa neefsashada iyo kor u qaadista qanjirka.
In cudurada caloosha, beerka, mindhicirrada, gallbladder Casiirka Aloe wuxuu caawiyaa soo celinta hababka dheef-shiidka iyo hababka dheef-shiid kiimikaadka.
In lagu daaweeyo cudurada nidaamka genitourinary Aloe waxaa loo isticmaalaa in lagu siiyo jeermi-dilaha iyo falalka duriinka.
Cudurada la xidhiidha geeddi-socodka dheef-shiid kiimikaadka ee jidhka ku jira, sidoo kale daweeye. Casiirka Aloe waxaa loogu talagalay isticmaalka sonkorowga iyo dadka qaba dhibaatooyinka wadajirka ah.
Cunnooyinka isticmaalaya dhirta
Laga soo bilaabo waxa kaliya ee aan ka caawinin badmaaxiinta, laakiin qaba cuduro kala duwan oo isticmaalaya cuntooyinka kala duwan. Wixii diyaarinta daroogada u baahan tahay si loo yareeyo tirada loo baahan yahay caleemo. Way fiican tahay inaad isticmaasho hoose - marwalba waa weyn tahay.
Ma taqaanaa? Aloe waxaa loo isticmaalaa qaab casiir, tinctures iyo decoctions.
Waxaa fiican in daawooyinka si toos ah loo diyaariyo ka hor inta aan la isticmaalin, iyo in aan la diyaarin. Aloe oo cadaadis leh cadaadiya ayaa leh sifooyin badan oo lagu dhawaaqo.
Si aad u tuujiso casiir ka samaysan aloe, caleemaha ayaa horay loo dhaqay biyo la karkariyey, googooyo yar yar - qiyaastii 0.2 cm, waxaa lagu tirtiraa faashad. Waxaad sidoo kale ka boodi kartaa caleemaha aloe iyada oo Booqday Furimaha Dagaalka hilib ah ka dibna tuujin juice iyada oo cheesecloth.
Waa muhiim! Warshadda loo isticmaali doono cuntada waa in ay ahaataa ugu yaraan 3 sano. Ka hor inta aadan codsanin waxaad u baahan tahay inaad diyaariso: ha uumi biyo 2 asbuuc, ka dib markaad caleemo gooyo. Caleemaha la gooyey waa la maydhaa oo qaboojiyaha loogu talagalay 7-10 maalmood.
Xanuunada qumanka ama xayawaanka, qamriga aloe waxaa lagu daweeyaa qumman. Waxaa sidoo kale jira cuntooyin badan oo isticmaalaya dhirtaas. laga bilaabo cunaha xanuunka:
decoction ee miskaha iyo casiirka aloe - anti-bararka iyo daaweynta vitamin ka hor cuntada ka hor 50 ml;
isku dar ah cabitaanka aloe - 1 qaado oo biyo ah (decoction of St. John's wort, calendula, sage, chamomile, iwm) - 20 ml, soodhaha - 1 tsp, iodine - 2 dhibcood. Iyada oo isku dar ah, gargle;
isku dar ah aloe, malab, vodka oo ah saamiga 1: 2: 3 waxaa loo isticmaalaa qaab isku xoqaya cunaha;
xalka 1 qaado oo ah cabitaanno aloe iyo galaas biyo diirran. Waxaa loo isticmaalaa qashinka habaysan ee maalintii;
Waxaad si fudud u tirin kartaa caleemaha aloe, taas oo sidoo kale leh saameyn bogsiinaysa cunaha.
Bronchitis iyo neefta sambabada
Wixii daaweynta boronkiito Cunto kala duwan, oo ay ku jiraan aloe. Midda ugu fudud ee ay tahay in la isku daro hal koob oo casiir ah oo aloe iyo galaas oo malab, ku dar 100 ml oo ah vodka ama aalkolo.
Maaddooyinka ayaa si fiican isku dhafan oo ku adkee meel qabow mug leh 5 maalmood. Ku kaydi isku darka qaboojiyaha oo qaado 1 qaado oo 3 jeer ah maalin kasta cuntada ka hor.
Qodob kale oo loogu talagalay boronkiifka aloe: 750 ml oo ah Cahors oo leh 350 g oo malab ah. Haddii malabku yahay sonkor, waa in lagu dhalaaliyaa biyaha qubeyska, heerkulka taas oo aan ka badnayn 60 ° C.
Caleemaha caleemaha waa la jarjarey oo lagu riday dhalo diirran, kadibna waxay ku shubtay malab iyo hubaal. Walaaq oo ku rid qaboojiyaha ilaa 2 asbuuc. Ka dib markaan isku daro waa la ciribtiray lana garaacay. Waxaad u baahan tahay inaad qaadato 1 qaado oo saddex jeer maalintii ilaa boronkiitku ka boodo.
Iridda neefta Aloe waxaa loo isticmaalaa sida soo socota. Isku qas quraar badhkeed oo cabitaanno leh kala badh hal galaas oo malab, ku dar 4 liin, 0.5 litir oo Cahors ah iyo qolalka dhulka ee laba ukun.
Ka dib markaad isku dardarto, waxaad dhigtaa meel mugdi ah toddobaadkii. Si aad u aqbalo calool madhan 30 milmood gudahood 3-6 bilood.
Iyadoo oof-wareen (pneumonia) qaadan casiir aloe cusub isku qasan yahay oo la mid ah malab iyo xawaash laba goor maalintii, 1 qaado oo qado ka dib.
Sidoo kale, marka bararka sambabada la diyaariyo casarkii khamriga ee cas. Qiyaasta ugu badan ee daaweynta ee 2-3 bilood waxay u baahan tahay 1.5 kg oo caleemo ah, 2.5 kg oo malab ah iyo 850 ml oo Cahors ama khamri ah.
Dhammaan qaybaha waa isku dhafan oo lagu dhejiyaa weel dhalada ah, kaas oo si adag u xiran oo ku rid mugdiga illaa 5-7 maalmood. Isku daridkan waxaa la qaataa 1 qaado oo ah saacad kahor cuntooyinka 1-3 jeer maalintii.
Cabbiraad kaarboonka halbowlaha ayaa lagula talinayaa sidii looga hortagi lahaa cirrhosis beerka. Fosfatase enzyme ee ku jira geedka ayaa xakameynaya shaqada beerka.
Cagaarshow iyo cholecystitis diyaari isku dar ah: 1 qaado qaado aloe, lebpermint, yar yar, sanduuq aan la saari karin, celcelin weyn iyo 1 qaado oo ah goosad.
Dhamaan tani waxay ku shubeysaa biyo karkaraya, dabool oo ku hayn meel qabow mudo ah 2 saacadood. Faleerka wuxuu u baahan yahay inuu xaddido oo qaado 1/3 koob 15 daqiiqo cuntada ka hor 3 jeer maalintii.
Qabow Cuntada soo socota ayaa loo isticmaalaa: ½ koob oo malab ah, 1 qaado oo cabitaanka aloe, casiir ka mid ah laba miraha liin waa isku qasan oo qaado 2 qaado oo saacad kasta.
Qabow qabow wuu isticmaali karaa casiir aloe cusub, oo lagu qasi jiray biyo, for instillation galay sanka. Nadiifinta sanka oo dhan 2 dhibcood 4 jeer maalintii.
Dhibaatooyinka noocan ahi waxay keenaan hindhisada, taas oo ka dhalatey sinjiyada nadiifka ah. Neefsashadu waxay noqotaa mid sahlan, bararna way ka baxdaa.
Marka qufacayo qaado 25 garaam oo badheedh ah, 25 garaam oo casiir ah lingonberry iyo 10 garaam oo malab ah. Maaddooyinka waa isku dhafan oo qaado 2 qaado 4 jeer maalintii.
Haddii ay dhacdo cudurrada caloosha
Faa'iidooyinka la garan karo ee aloe ee daaweynta cudurrada caloosha. Cadaadiska hurgunka ee "hypoacid" iyo "gastric ulcer" lagu daaweeyo isku dar ah oo ah Hadeydaan.
Cunto: Qaado qaybo siman oo ka mid ah aloe, malab, casiir caano ah; diyaariso decoction dhirta yarrow, burooyinkeeda geed, gaajo iyo jimicsi.
Isku qas dhammaan walxaha, taas oo keentay in tincture bogsashada leh aloe for xanuunada caloosha. Ku kaydi isku dar ah qabow, qaado 2 saac ka hor cuntada, hal shaaha.
Waa muhiim! Aloe wuxuu leeyahay qalabka jilicsan, adigu ma dhaafi kartid isticmaalkiisa, si aadan u keenin shuban iyo calool xanuun.
Sida dhirta kale ee daawooyinka iyo walaxyada, aloemozhet waxay keenaan faa'iidooyin iyo waxyeelo labadaba. Casiirka Aloe waa daaweyn dabiici ah oo xoog leh oo xoojiya geeddi-socodka jirka. Isticmaalka aloe waxaa lagu talinayaa xaaladaha soo socda:
dhiig-raacista, dhiig-baxa jirka;
falcelin xasaasiyad xun;
marxaladaha daran ee cudurrada xubnaha jirka ee gef ku ah shaqadooda: wadnaha, beerka, kelyaha;
joogitaanka cuduro badan oo adag;
la'aanta calaamado qeexan oo ku saabsan caafimaadka saboolka ah.
Aloe wuxuu bogsiinayaa sifooyinka ka caawiya cudurrada kala duwan, laakiin waxaa sidoo kale jira khilaaf. Waana muhiim inaad maskaxda ku hayso markaad is-daaweysid. Haddii ka dib marka la helo iyo sida loo isticmaalo falcelinta aloe-celinta, waa in la joojiyaa oo la tasho dhakhtar.